Xiaomi Mi 9 Lite ga-abụ ihe dị iche na Xiaomi CC9 | Gam akporosis
Mi 9 Lite ga-abụ ihe dị iche na Xiaomi CC9 ma dị nso iru ahịa
Na Febụwarị nke afọ a Xiaomi Mi 9, ọkọlọtọ nke jigidere uru dị oke mma maka ego nke onye nrụpụta China na-ahọrọ mgbe niile maka ụdị ya niile. Nke a nwetara ihe karịrị otu ụdị na, ọ bụ ezie na Mi 9 SE achoputara ya dika nke Lite ya, obughi n’ezie.
Nke ikpeazụ bụ na ụlọ ọrụ ga-ahapụ ugbu a My 9 Lite, ọ bụ ezie na a maghị mgbe. Agbanyeghị na ọ bụ ihe a tụrụ anya ya, ekwuputabeghị ya na eze, yabụ ugbu a anyị nọ n'ọkwa asịrị na ntapu. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe ngosi ndị na-atụ anya na ọ na-enweta ume ka ụbọchị na-aga, na ihe anyị bịara ikwu maka nke a bụ nke kachasị nso pụtara.
Mishaal Rahman, onye isi nchịkọta akụkọ nke ndị nrụpụta ama ama ama ama XDA-Mmepe, elu otu mbipụta na akaụntụ Twitter ya banyere ngwaọrụ ọhụrụ akpọrọ Mi 9 Lite. N'ime nke a, o dekọtara nke ahụ N'oge na-adịbeghị anya pụtara na ndepụta Google nke ngwaọrụ gam akporo. Ọ na-egosikwa na ọ bụ a variant nke Xiaomi CC9 O nwekwara otu aha aha 'pyxis' nke ama ama a.
Xiaomi Mi 9 Lite gbaara dika CC9 di iche
Enweghi ozi zuru ezu banyere ngwaọrụ ahụ, mana ewezuga mgbanwe aha ahụ, Ọ ga-enwe otu nkọwa dị ka Mi CC9. Nke a abụghị oge mbụ ekwentị Xiaomi ga-enwe aha dị iche n’ahịa dị iche. Na Redmi K20/K20Pro na Xiaomi Mi 9T / 9T Pro bụ ihe atụ kachasị ọhụrụ. Enwekwara Redmi Rịba 5A (Prime), nke ewepụtara dị ka Redmi Y1 na India n'oge gara aga.
Xiaomi Mi 9 5G ga-abụ ihe ngosi 5G dị ọnụ ala na ahịa
Cheta nke ahụ na Mi CC9 bụ ufọt ufọt nso nke na-abịa na Snapdragon 710, ihuenyo AMOLED nke 6.39-anụ ọhịa, 48 MP + 8 MP + 2 MP okpukpu atọ, igwefoto n'ihu nke 32 MP na batrị 4,030 mAh na nkwado maka 18 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa.
N'oge na-adịghị anya, anyị ga-enweta ozi ndị ọzọ gbasara Mi 9 Lite si Xiaomi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mi 9 Lite ga-abụ ihe dị iche na Xiaomi CC9 ma dị nso iru ahịa
Huawei ga-eweta FreeBuds ọhụrụ na IFA 2019